Gaalkacyo oo caawa u gudubtay wareegga 2aad iyo Isku aadka wareegga 2aad oo la shaaciyay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii kow iyo tobnaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa 15-aad ee wareegga 1aad ku tartami lahaa degmooyinka Hodan iyo Gaalkacyo oo ka kala tirsan Gobollada Banaadir iyo Mudug, waxaana barnaamijka sanadkii 2aad oo xiriir ah taaba-gelineya Bangiga IBS.
Guddoomiyaha Tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka Yaxye Cali Faarax ayaa sheegay in tartanka ay caawa ku balansanaayeen Hodan iyo Gaalkacyo, balse Tartamayaasha Hodan oo sharuucda tartanka horey u buuxisay, isla markaana dhameystirtay sharciga diiwaangelinta ay cudurdaarteen inay la tartamaan dhigooda Gaalkacyo.
“Tartamaayasha Hodan runtii warqadaha codsiga horey ayay u soo gudbisteen, waxaana ay buuxiyeen sharuucdii tartanka u yaalay, Gaalkacyana hada waxa ay diyaar u yihiin inay dhankooda tartanka qeyb galaan maadaama ay soo xaadireen, balse Tartamayaasha Hodan ayaa cudur daartay, sida sharciga tartanka uu dhigayo degmadii soo xaadirta ayaa la siinayaa dhibcaha, sidaas ayayna Gaalkacyo ugu gudbeen wareegga xiga ee tartanka”. Ayuu yiri Yaxye Cali Faarax.
Mudane Yaxye Cali Faarax ayaa akhriyay isku aadka wareegga 2aad ee tartanka oo ay isugu soo baxeen 15 koox, halka lagu daro degmadii ugu dhibcaha badnaata wareegga 1aad ee tartanka.
“Sida sharciga tartanka dhigayo waxaa wareegga 1aad ka soo gudbay 15 degmo, waxana lagu daray Degmada Howlwadaag oo 28 dhibcood iyada oo leh laga badiyay, sidaas ayayna tartamayaasha ku noqdeen 16 degmo”.ayuu yiri Yaxye.
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka 16-aad ee tartanka, waxaa jiri doono afar degmo, iyadoo qeybta hore ay ku tartami doonaan degmooyinka Xamar Jajab iyo Kismaayo oo ka kala tirsan Gobollada Banaadir iyo Jubbada Hoose, kaasi oo soo gali doono 9:45, halka kan ku xiga ay ku wada tartami doonaan Degmooyinka Kaxda iyo Deyniile oo ka wada tirsan Gobolka Banaadir.
Halkan ka akhriso isku aadka wareegga 2aad ee tartanka
Sawir Qaade: Sakariye Shiddo
Cismaan Xaadoole oo ku guuleystay kursiga Hop#106
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Guddoomiyeyaasha Kumeel Gaarka ah ee Labada Aqal “SAWIRRO”